‘कोरोना संक्रमितको उपचार र परीक्षणका लागि महानगरपालिका सचेत र सजग छ’: उपमेयर गुरुङ — donnews.com
यतिबेला पोखरा महानगरपालिकामा कोरोना संक्रमणको स्थिति भयावह बन्दै गईरहेको छ । गण्डकी प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्यामात्र आठहजार एकसय ४ भन्दा बढि नै पुगिसकेको छ । त्यसमध्ये कास्की जिल्ला भित्र संक्रमितको संख्या दुईहजार सातसय ९३ पुगेको छ भने निको हुनेको संख्या सातसय ७२ रहेको छ । त्यसैगरी सक्रिय केसमा एकहजार नौंसय ८८ रहेको छ र ३३ जनाको मृत्यु भईसकेको छ । कास्की जिल्लामा पनि पोखरा महानगरपालिका यतिबेला सबैभन्दा बढि कोरोना संक्रमित हुने ‘हटस्पट’का रुपमा देखा परेको छ । दिनहुँ सयौंको संख्यामा कोरोना संक्रमितहरु थपिएका छन् । कोरोना संक्रमितको मृत्युको घटनाले पनि पोखरेलीहरुमा त्रास फैलिई रहेको अवस्था छ । यो विषम परिस्थितिमा पोखरा महानगरपालिकाले के कस्ता कामहरु गर्दैछ भन्ने विषयमा केन्द्रीत रहेर पोखरा महानगरपालिकाका उपमेयर मञ्जु गुरुङसँग डन न्यूजका प्रधान सम्पादक राजेन्द्र अधिकारीले गर्नुभएको संक्षिप्त कुराकानी :
त्यसैगरी पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा पनि बेडहरुमा आवश्यकता हेरेर अक्सिजन पाईप बनाई दिने काम अगाडि बढाएका छौं । पोखरा महानगरपालिकाले १०४ वटा अक्सिजनसहितको बेड तयार गर्दैछ । हामीले यसका लागि सम्बन्धित पक्षहरुसँग छलफल गरिसकेका छौं । जस अन्तर्गत पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा ७० शैया र लेखनाथस्थित सङ्क्रामक रोग अस्पतालमा ३४ शैयाका लागि अक्सिजन पाइप जडान गर्ने काम भइरहेको छ । त्यसको लागि महानगरले पूर्वाधार र कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि १० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएर अघि बढेको छ ।
डन न्यूज : पोखरा महानगरपालिकामा पछिल्लोपटक कोरोना संक्रमण र मृत्युको संख्या एकदमै बढेको छ । महानगरपालिकाको तयारी के छ ?
उपमेयर : अब पोखरा महानगरपालिकाले माथि संघबाट जे–जे निर्देशन गरेको थियो, त्यहीँ कामहरु गरियो । प्रि–आईसोलेसन तयार पार्ने भनियो, त्यही काम गरियो । तर अक्सिजनसहितको बेड तयार गर्ने, आवश्यक प्राविधिक जनशक्तिका विषय हाम्रो वशको कुरा भएन । तर हामी हाम्रो दायित्वबाट पन्छिने नभई कहाँ–कहाँ के गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ चिन्तित छौं । त्यसैले हामीले लेखनाथ मोहरियास्थित संक्रामक रोग अस्पतालमा अक्सिजन पाईपसहितको बेड रहेनछ । त्यहाँ अनुगमन गरेपछि हामीले तत्कालै बेडमा अक्सिजनको पाईप बनाई दिने भएका छौं । त्यसैगरी पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा पनि बेडहरुमा आवश्यकता हेरेर अक्सिजन पाईप बनाई दिने काम अगाडि बढाएका छौं । पोखरा महानगरपालिकाले १०४ वटा अक्सिजनसहितको बेड तयार गर्दैछ । हामीले यसका लागि सम्बन्धित पक्षहरुसँग छलफल गरिसकेका छौं । जस अन्तर्गत पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा ७० शैया र लेखनाथस्थित सङ्क्रामक रोग अस्पतालमा ३४ शैयाका लागि अक्सिजन पाइप जडान गर्ने काम भइरहेको छ । त्यसको लागि महानगरले पूर्वाधार र कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि १० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएर अघि बढेको छ ।
डन न्यूज : अक्सिजनसहितको बेड कहिलेसम्म तयार हुन्छ त ? ढिला भएन र ?
उपमेयर : हामीले कार्तिक ६ गते नै बसेको संयुक्त बैठकमा यो निर्णय गरेका हौं । प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति थियो । हामीले त्यही निर्णय गरेर पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखराका निर्देशक सह.प्रा.डा. अर्जुन आचार्य सरलाई यसको जिम्मेवारी दिईसकेका छौं । उहाँले आवश्यक कामहरु तत्कालै गर्नु हुनेछ । र, त्यसको सम्पूर्ण खर्च पोखरा महानगरपालिकाले व्यहोर्ने छ ।
डन न्यूज : जिम्मा मात्र दिनु भएको हो कि रकम पनि दिनुहुन्छ तपाईहरुले ?
उपमेयर : पोखरा महानगरपालिकाले बोलेपछि रकम निकासा पनि गर्छ । ढुक्क हुनुहोस् ।
डन न्यूज : यो विषम परिस्थितिमा पोखरा महानगरपालिकाले यो बाहेक अरु के–के काम गर्दैछ ?
उपमेयर : हामीले यसरी पोखरा महानगरपालिका भित्र कोरोना संक्रमण बढ्दै गयो भने लेकसिटी हस्पिटललाई आईसोलेसनका रुपमा लैजाने तयारी गर्दैछौं । केही मिडियामा पहिले नै आईसोलेसन भनेर पनि समाचारहरु आए । त्यो होइन । यसलाई हामीले क्वारेन्टिनको रुपमा प्रयोग गर्दै आईरहेका थियौं । यस अस्पताललाई आईसोलेसनका रुपमा प्रयोग गर्न पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक डा. अर्जुन सरलाई हामीले १ पटक यस अस्पतालको अब्जरवेसन गर्नुस् भनिसकेका छौं । त्यस अस्पतालमा बेडहरुमा अक्सिजनको पाईप पहिले नै फिट भएको रहेछ । त्यही भएर, बढ्दो संक्रमणको अवस्थामा थप उपचारका लागि यस अस्पताललाई प्रयोग गर्ने निर्णयमा महानगरपालिका पुगिसकेको छ । आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले उपलब्ध गराएमा त्यसको सम्पूर्ण खर्च महानगरपालिकाले गर्ने सहमति पनि भईसकेको छ ।
डन न्यूज :अहिलेको कोरोना संक्रमणको अवस्था झन् विकराल बन्दै गईरहेको छ । किन यस्तो हुँदैछ जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
उपमेयर : यो त मानिसहरुको गतिविधि हेर्दा बाहिर सबै हिसाबले कोरोना संक्रमणको अवस्था बढ्ने देखिन्छ । अलि कति स्वास्थ्यको मापदण्डलाई ख्याल गरिदिएको भए यति सारो हुने थिएन । अब कसैले पनि त्यो गर्दैन । यो समय मौसम परिवर्तनको बेला पनि हो । चाडवाडको बेला पनि भयो । त्यसैले गर्दा स्वभाविक रुपमा अझै बढ्छ जस्तो लाग्छ मलाई ।
डन न्यूज : एकजना कोरोना संक्रमितको उपचार पनि गर्न पनि पोखरामा धौं धौं परेको विषयहरु सञ्चारमाध्यमहरुमा आईरहेका छन् । यस्तो कहाली लाग्दो परिस्थितिलाई कसरी नियाल्नु भएको छ ?
उपमेयर : दशैंभन्दा अगाडि नै यो विषयलाई ख्यालमा राखेर हामीले बैठक बोलाएका थियौं । प्रमुख जिल्ला अधिकारी, गण्डकी प्रदेशका सचिव, स्वास्थ्य निर्देशनालय, गण्डकी प्रदेशका निर्देशक, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक, हाम्रो महानगरपालिकाको स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख र मेयर साहेब सहित हामीहरु बसेर यो विषयमा छलफल गरेका थियौं । पोखरा महानगरपालिका खर्च गर्न तयार छ । तपाईहरुले व्यवस्थापन मिलाउनु होस् । तपाईहरुले डाक्टरसहित स्वास्थ्यकर्मीको मेनपावर उपलब्ध गराउनु होस्, त्यसका लागि खर्च व्यहोर्न महानगरपालिका तयार छ भनेका थियौं । उहाँहरुले यस विषयमा काम अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई । कोरोना संक्रमितको उपचार नै नहुने कहाली लाग्दो परिस्थिति आउन नदिन हामी सचेत र सजग छौं ।
डन न्यूज : सरकारले लक्षित वर्ग बाहेक कोरोना संक्रमितको उपचार र परीक्षण निशुल्क नगर्ने भनिरहेको छ । पोखरा महानगरपालिकाले यही निर्देशनलाई पालना गर्छ कि केही फरक छ तपाईहरुको सोंच ?
उपमेयर : त्यो त स्वभाविकै हो, हामीले संघले गरेको निर्णय नै मान्नै पर्दछ । कोरोना संक्रमणको उपचार र परीक्षण केन्द्रले गरेको निर्णय अनुसार नै हुन्छ । सक्ने मानिसले त आफैंले उपचार गर्नै प¥र्यो नि । लक्षित वर्गलाई निशुल्क भनेर तोकेकै छ । यो विषयमा समस्या छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।